Naya Post Nepal | सिके राउतको कार्यक्रममा भर्खरै चल्यो गोली !
सिके राउतको कार्यक्रममा भर्खरै चल्यो गोली !
सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले जारी राखे को आ’न्दोलनका क्रममा धनुषाको पोर्ताहामा गो’ली चलेको छ । गोली प्रहारबाट एक प्रहरीसहित पाँच प्रदर्शनकारी घा’इते भएका छन् । किसानमुखी विभिन्न सात मागसहित अ’निश्चतकालीन याता यात ब’न्दमा उत्रिएको जनमत पार्टी तोडफोडमा उत्रिएपछि गो’ली चला इएको प्र’हरीले ज’नाएको छ ।
अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान खोजेपछि २५ शेल आँश्रुग्यास र प्लाष्टिकका गो’ली च’लाइएको जनाइएको छ । आन्दोलनकारीहरुले भने प्रहरीले अन्धाधुन्ध गो’ली चलाएको आ’रोप लगाएका छन् ।”“आन्दो- लनकारी सञ्जय कुमार साहले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा गो’ली प्र’हार गरिएको आ’रोप लगाए ।
सो क्रममा घा’इते भए का पाँच जनाको प्रादेशिक अस्पतालमा उ’पचार भइरहेको उनले बताए ।“सिरहाको औरही गाउँपालिकामा किसानहरूका लागि ग हुँको बिउ स्थानीय किसानलाई वितरण नगरेको र किसान हरूले जबर्जस्ती आफैँ लगेपछि प्रहरीले चार जना किसानलाई प’क्रा’उ गरेको विरोधमा पुष ९ गतेदेखि जनमत पार्टी आन्दो लनमा छ ।
सो घटनापछि गाउँपालिकामा तालाबन्दीमा उत्रिएको जनमत पार्टीले किसानलाई सहुलियत दिने गरीको पूर्वाधार बनाउनेदेखि मलखाद उपलब्ध गराउनु पर्नेसम्मका सात बुँदे माग राखेको छ ।
यो पनि ,, साताको पहिलो दिन अर्थात आज (आइत बार) नेपाली बजारमा सुनको भाउ ब’ढेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ६०० रुपैयाँले ब’ढेको सुनको भाउ आज आइतबार पनि प्रतितोला ७०० रुपैयाँले ब’ढेको नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी महासंघले नयाँ पुस्तालाई जा’नकारी दिएको छ ।
महासंघका अनुसार आज छा’पावाल सुन प्रतितोला ९३ हजार ४०० रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। छा’पावाल सुन शुक्रबार प्र’तितोला ९२ हजार ७०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्य’वसायी म’हासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सुनचाँदीको का’रोबार मूल्यका आ’धारमा दै’निक रुपमा सुन तथा चाँदीको का’ रोबार मूल्य तो’क्दै आएको छ।
महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कनुसार आज ते’जाबी सुन को मूल्य पनि ब’ढेको छ। आज तेजावी सुन प्रतितोला रु ९२ हजार ९०० रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। शुक्रबार ते’जाबी सुन प्रतितो ला रु ९१ हजार २०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
सुनको भाउ बढेसँगै आज चाँदीको भा’उ पनि बढेको छ । महास ङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १ हजार २७० रुपैयाँमा का’रोबार भइरहेको छ। शुक्रबार चाँदी प्रतितोला रु १ ह जार २६० रुपैयाँमा का’रोबार भएको थियो।
२०७८ पुष १८, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 151 Views